Markaad ku isticmaasho Daabacaadda daabacaadda 'Ubuntu', miyayna sii koobiyeynin qabashada shaashadda? Marka waad xallin kartaa | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Noocyada kahor Ubuntu 18.x waxaad isticmaali kartaa furaha shaashadda Daabac si aad u dhaafto barnaamijka qabashada oo kuu oggolaado inaad kala doorato inta u dhexeysa inaad nuqul ka sameysato galka ama aad ku keydiso feylka sawirka magac kastoo aad rabto. Laakiin isbeddelada garaafyada ee ku dhacay noocyadan cusub ee Ubuntu, hadda waxaad arki doontaa in barnaamijku jiro Shaashadda inaad sii wadi karto adeegsiga dhib la'aan.
Taabadalkeed, waxay noqoneysaa waxyar oo daal badan hadaadan furin ama aadan kusii hayn bilaaleeyaha si loogu isticmaalo badanaa. Dhibaatadu waxay tahay haddii aad riixdo Shaashadda Daabac shaashadda waxba kama muuqdo. Waxa ay si otomaatig ah u sameyso ayaa ah qabashada iyo keydinta sawirka la qabtay ee ku jira galka Sawirada ee galka gurigaaga. Tani waa mid waxtar leh haddii aad rabto inaad keydiso qabashada isticmaalka dambe. Laakiin dad badan, sida aniga oo kale, ayaa u adeegsada xilligan inay wax ka beddelaan.
Xaaladahaas, nidaamkii hore wuxuu ahaa mid wax ku ool ah. Si loo xaliyo iyo maxaa marka aad riixdo daabacaadda shaashadda waxay qaadaysaa sawirka shaashadda oo waxay uga tagaysaa sabuuradda si aad markiiba ugu dhejin kartid sawir ama sawir dib-u-hagaajin sawir ah, waad ku xallin kartaa hab aad u fudud. Kaliya waa inaad bedeshaa tuuryo kumbuyuutarka caadiga ah ee kumbuyuutarka GNOME.
Waxa ay tahay inaad sameyso waa sahlan tahay. Kaliya raac talaabooyinkan:
Fur barnaamijka qaabeynta nidaamka Ubuntu 18.x ama ka sareeya.
Dhinaca, ka mid ah xulashooyinka, raadi Qalabka.
Gudaha tag Keyboard.
Hadda, ka mid ah goobaha kumbuyuutarka, raadi labada goobood oo u dhigma shaashadda shaashadda wixii ka soo gaabaya kumbuyuutarrada aan ku tusayo sawirka guud ee maqaalkan.
Waxaad ku arki doontaa taas gudaha Koobiso shaashadda shaashadda, toobiye waa Ctrl + Daabac Shaashadda. Dhanka kale Ku keydi shaashadda sawirrada keligiis dhigaa Shaashadda Daabac. Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad maal gashato:
Guji midka hore daaqad ayaa kuu muuqan doonta iyada oo ku weydiineysa inaad taabato furaha ama furayaasha aad rabto inaad ku hagaajiso ficilkaas. Kadib riix Shaashadda Daabac.
Haddaba, xulashada labaad, dhagsii ka dibna isku mar riix Ctrl + Print Screen.
Aqbal oo tag.
Hada laga bilaabo, mar kasta oo aad taabatid Shaashad Daabac ah waxaa lagugu qabanayaa gudaha xaraash oo waxaad ku dhejin kartaa barnaamij kasta oo sawir ah ama dukumeenti xafiis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Markaad ku isticmaasho Daabacaadda daabacaadda 'Ubuntu', miyayna sii koobiyeynin qabashada shaashadda? Marka waad xallin kartaa
Su'aal ka timid neophyte, iyo maxaad u beddeleysaa wax shaqeynayay oo hadda waa inaad tagtaa si aad u hagaajiso qaabeynta.
Waa maxay mania in la beddelo waxyaabaha si fiican u shaqeeyay si aan loo garanaynin waxa lagu cabiro nabadgelyada ama barnaamijyada ... Shaashadda soo qaad oo ka tag kumbuyuutarrada dariiqyada keligood isticmaalaha u caadaystay.
Waa nooc ka mid ah waxyaabaha qofka cusub ku qaata daaqadaha ka fog Linux.
Jawaab Mario Anaya
Xirmada Qalabka Garashada: Isha Furan ee Barashada Qoto dheer SW